फेसबुकले नै किन माग्न थाल्यो नग्न तस्वीर ? यस्तो छ कारण….. « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
फेसबुकले नै किन माग्न थाल्यो नग्न तस्वीर ? यस्तो छ कारण…..
फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्तासँग नग्न तस्वीर माग्न थालेको छ । प्रारम्भिक चरणमा फेसबुकले बेलायती प्रयोगकर्तालाई आफ्ना नग्न तस्वीर पठाउन भनेको छ । यसअघि अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्तासँग फेसबुकले नग्न तस्वीर मागेको थियो । फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको नग्न तस्वीर किन मागेको होला ? धेरैको मनमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उब्जिन सक्छ । तर प्रयोगकर्ताकै सुरक्षाका लागि यसरी नग्न तस्वीर मागिएको फेसबुकले प्रष्ट पारेको छ । कतिपय प्रयोगकर्ताहरु कसैको बदलाको भावनाबाट शिकार बन्दै आएको उल्लेख गर्दै फेसबुकले त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई जोगाउनका लागि नग्न तस्वीर मागिएको जनाएको छ ।
फेसबुकमा कतिपयले अरुको नग्न तस्वीर पोस्ट गर्ने, म्यासेन्जरमा पठाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने लगायतका गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै फेसबुकले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगकर्ताहरुको नग्न तस्वीर मागिएको प्रष्ट पारेको छ । फेसबुकका अनुसार कसैसँग तपाईको नग्न तस्वीर छ भन्ने लाग्छ र उसले तपाईको नग्न तस्वीर फेसबुकमा पोस्ट गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईलाई यो प्रविधिबाट जोगाउन सकिन्छ । फेसबुकले बेलायत, अमेरिका र क्यानाडामा यो प्रविधि प्रयोग गर्न थालेको छ । फेसबुकका एक प्रवक्ताका अनुसार प्रयोगकर्ताका लागि यो एक खुला प्रस्ताव हो, तस्वीर पठाउन करकाप भने छैन ।
फेसबुकका अनुसार प्रयोगकर्ताले पठाएको तस्वीरलाई पाँचजनाको एउटा समूहले हेर्नेछ । ती पाँचैजना प्रशिक्षित समीक्षक हुन् । त्यसपछि सबै तस्वीरलाई एक खास डिजिटल फिंगरप्रिन्ट दिइनेछ । ती तस्वीरलाई डाटाबेसको रुपमा एउटा कोड स्टोर गरिन्छ । ती तस्वीर कुनै पनि प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा अपलोड गर्न खोजेमा उक्त कोडले तस्वीर सनाखत गरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जरमा आउनु अघि नै ब्लक गर्ने फेसबुकको दावी छ । तर यो प्रविधिबाट प्रयोगकर्ताको नग्न तस्वीर फेसबुकमा पोस्ट नहुने शतप्रतिशत ग्यारेन्टी नभएको फेसबुकका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार फोटोलाई कसैले सम्पादन गरेर, टोडमोड गरेर मूल तस्वीरभन्दा अलग बनाउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेसबुकको डाटाकोडले उक्त तस्वीर सनाखत गर्न सक्दैन । तर फेसबुकले यसलाई प्रारम्भिक चरण भन्दै थप विश्वासिलो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । तर आफूसँग भएको आफ्नो कुनै नग्न तस्वीर अरुसँग पनि छ र उसले ती तस्वीर फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्न सक्छ भन्ने आशंका गरिरहेका प्रयोगकर्ताका लागि भने यो प्रविधिले धेरै हदसम्म सघाउने फेसबुकको दावी छ । तर कसैले उसको आफ्नै मोबाइल वा क्यामेराबाट कसैको नग्न तस्वीर खिचेको छ, र त्यो तस्वीर तपाईसँग छैन भने त्यस्ता तस्वीरलाई अपलोड हुनबाट रोक्न सक्ने प्रविधि तत्काल फेसबुकसँग नरहेको बताइन्छ । कसैले उजुरी गरेमा पोस्ट भइसकेका तस्वीरलाई फेसबुकले हटाउन सक्छ ।।